I-Pushpa 2: Sinolwazi Olujabulisayo Mayelana Nosuku Lokukhishwa! - Izindaba Ezintsha
I-Pushpa 2: Sinolwazi Olujabulisayo Mayelana Nosuku Lokukhishwa!
I-Pushpa 2: Idethi yokukhishwa
I-Pushpa: The Rise, ifilimu yedrama ye-Indian Telugu ebhalwe futhi yaqondiswa nguye USukumar , izokhishwa ngo-2021. Ifilimu yeTelugu, ekhiqizwe iMythri Movie Makers kanye neMuttamsetty Media, izihlabani Konke Arjun , Fahadh Faasil , futhi Rashmika Mandanna phakathi kwabanye abalingisi.
Ngaphezu kuka-Jagadeesh Prathap Bandari kanye no-Sunil, ifilimu iphinde ibe nabanye abalingisi abafana noDhananjaya no-Anasuya Bharadwaj. U-Ajay no-Ajay Ghosh nabo bayavela kule filimu.
Ingcaphuno evela kweyodwa yamafilimu amabili ebonisa ukukhuphuka kwe-coolie kunhlangano eshushumbiswayo e-red-sander-sander esifundazweni sase-Indian, i-Andhra Pradesh, okuyikhaya lohlobo lokhuni oluyivelakancane olwaziwa ngokuthi ama-sander abomvu. Nakhu lapho ungathola khona lonke ulwazi lwakamuva ku-Pushpa 2.
Ngokombiko oshicilelwe ngoLwesithathu yi-Mumbai, i-Pushpa: I-Rise ka-Allu Arjun izosakazwa ngohlelo lokusebenza. isevisi ethandwayo ngaphezulu-phezulu (OTT). kusukela ngoJanuwari 7, 2022.
I-Telugu action-thriller, eyaboniswa okokuqala ezinkundleni zemidlalo yaseshashalazini ngoDisemba 17, 2021, yaya ekwamukelweni okujabulisayo ehhovisi lamabhokisi, yaba yinhlese. Le filimu yenziwa yatholakala nangezilimi ezibizwa ngokuthi isiHindi, isiMalayalam, isiTamil, nesiKannada.
I-premiere yedijithali yefilimu imenyezelwe ku-akhawunti esemthethweni ye-Twitter yomhlinzeki wesevisi we-OTT.
Uzolwa. Uzogijima. Uzogxuma. Kodwa angeke aphumelele!
Buka #PushpaOnPrime , Jan. 7
NgesiTelugu, isiTamil, isiMalayam nesiKannada @alluarjun #FahadhFaasil @iamRashmika @Dhananjayaka #Sanele #AjayGhosh #RaoRamesh @OG_Jagadeesh @ShatruActor @anusuyakhasba #Sritej #MimeGopi pic.twitter.com/lVxoE7DJSs
- amazon prime video IN (@PrimeVideoIN) Januwari 5, 2022
Le filimu iphule irekhodi ehhovisi lamabhokisi aseNdiya ngo-2021, futhi ingelinye lama-blockbuster aseTelugu aphumelela kakhulu ezikhathini zonke. Ukukhiqizwa ku-Pushpa 2: The Rule, okulandelanayo kwefilimu, kuhlelwe ukuthi kuqale ngoFebhuwari 2022.
Indaba iqala ngamavolontiya akwa-Pushpa Raj ashushumbisa ukhuni olubalulekile esuka e-Seshachalam Hills esifundeni sase-Chittoor e-Andhra Pradesh ukuya e-United States.
Bheka lokhu: I-Sereirei Gensouki Isizini 2 iqinisekisiwe, okuhlanganisa idethi yokukhishwa, abalingisi, nesakhiwo! Bheka lapha!
U-Pushpa utholwe ecashile futhi isitoko siyatholwa ngesikhathi kugasela u-DSP Govindappa, ozuza ukwethenjwa ngumphathi wakhe u-Konda Reddy ohlelweni lokuthola nokuthola isitoko. Iqiniso lokuthi i-Pushpa yamukelwe njengozakwethu kunethiwekhi kungenxa yezindlela zakhe ezintsha zokuthutha ama-sander abomvu. U-Konda Reddy unikeze i-Pushpa udumo ngalokhu kuhlonishwa.
U-Konda Reddy, omunye wabathengisi be-Mangalam Srinu, ophethe ukubeka iso esitokweni senkampani samathani angama-200. UPushpa uqokwe kulesi sikhundla ngenxa yokuthi uJolly Reddy, umfowabo omncane kaKonda, kutholakala ukuthi akakwazi ukwenza imisebenzi.
Okwamanje, uGovindappa ubatholile futhi wazama ukulawula isimo. U-Pushpa ulahla zonke izingodo zokhuni emfuleni oseduze, kuyilapho ahambisana naye u-Keshav efumbathisa izikhulu futhi amadamu emfuleni ezansi nomfula ukuze asuse isitoko ngokushesha okukhulu.
Funda futhi: Idethi yokukhishwa kwe-Radhe Shyam: Sinolwazi Olujabulisayo Mayelana Nosuku Lokukhishwa!
U-Srinu no-Konda bakhululekile ukuthi isitoko asizange sithathwe ngenxa yesinqumo. Phakathi nephathi, u-Pushpa uthola ukuthi u-Srinu uthengisa izinkuni ngentengo ephakeme kakhulu kunaleyo ekhokhelwa yona.
Lapho u-Pushpa ephakamisa ukuthi u-Konda akhuphuke ngokumelene no-Srinu futhi afune isabelo sakhe esifanele sephayi, u-Konda uyenqaba.
Ngaleso sikhathi, uPushpa uhlangana noSrivalli futhi uwela phezu kwezithende othandweni naye ngokushesha. Ngenkathi unina kaPushpa elimele empini, umfowabo ongumzali oyedwa uphazamisa umcimbi futhi wenqaba ukuvuma okhokho bakaPushpa, abavela kuyise oshonile.
I-Pushpa iyamthukuthelisa lokhu, futhi kuyamkhuthaza ukuthi afinyelele amazinga amakhulu empumelelo. Ngemva kokushushumbisa izinkuni e-Chennai ngakusasa, u-Pushpa ufuna isigidi esingu-1 ngethani ku-Srinu, umnikazi wenkampani, lapho efika ngakusasa.
Lapho uSrinu enqaba, amadoda akhe amhlasela, kodwa uPushpa uyakwazi ukuwanqoba futhi awaqedele yena nomndeni wakhe. Kamuva, uPushpa uya e-Chennai, lapho befika esivumelwaneni sokuthengisa izingodo ngama-crores angu-1.5 ngethani, uKonda noPushpa njengabasayinise.
Ngenkathi ubaba wakhe eboshiwe, uJolly, othanda abantu besifazane, ugxeka uSrivalli ukuba abe nobuhlobo bobulili naye. Lapho ethola ukuthi uJolly ukhubazeke okwesikhashana, uPushpa uyathukuthela futhi amhlasele.
UKunda ufinyelela esiphethweni sokuthi uPushpa unecala lokugula komfowabo, ngakho uyamthumba futhi amyise endaweni ecashile emahlathini lapho ezobulawa khona. UPushpa uphoqeleka ukuthi abaleke futhi aziphindiselele ngemuva kokuthi amasosha aseSrinu eqale ukuhlasela okungalindelekile.
UPushpa uhlenga umfowabo kaKonda uJakka Reddy ekuqamekeleni ngemuva kokubulawa kukaKonda. Umlamu wakhe naye uthunjwe futhi wabulawa nguye, ngaphezu kokubulawa kukaSrinu.
Lapho uPushpa edalula imikhuba kaSrinu, ehlanganisa ukukhwabanisela inhlangano ngokunikeza amanani ancishisiwe, iLungu lePhalamende uBhumireddy Siddappa Naidu uhlela ukumiswa kokudubula.
Uzobuya kamuva. U-Pushpa uqokwa njengomphathi omusha we-syndicate ka-Naidu ezinsukwini ezimbalwa ngemva kokuqokwa. U-Pushpa uba ngumuntu owaziwayo phakathi nezinyanga eziyisithupha eqale umdlalo wakhe. Umkakhe uDakshayini umlimaza ngokumnquma intamo ngoba engakwazi ukuphindiselela ukufa komfowabo kusenesikhathi.
Funda futhi: Ihostela Daze Isizini 3 Iyeza ngo-2022? Isiqinisekiso Sosuku Lokukhishwa!
Njengonsumpa wesifunda, u-Bhanwar Singh Shekhawat, iphoyisa elinonya, uthatha izintambo njengoba nje uPushpa efinyelela esicongweni samandla akhe. UPushpa uhlangana naye njalo futhi amnikeze isifumbathiso se-crore rupees (cishe isigidi esingu-$1).
Funda futhi: Idethi yokukhishwa kwe-Resident Alien Season 2 iqinisekisiwe! Hlala ubheke izibuyekezo!
Iqiniso lokuthi uShekhawat uthi untula into eyodwa lesabisa uPushpa namasosha akhe… Ngaphezu kokuhlekisa ngokhokho bakaPushpa, usabisa ngokudubula isandla sakhe uma lo wakamuva engayivuli iminwe yakhe ngaso leso sikhathi.
U-Pushpa wethukile futhi umbiza ngokuthi mnumzane, u-Shekhawat aphendule ngokuthi lolu belungekho ucezu lwendida sonke lesi sikhathi. Ebhekene nomyalo kaShekhawat wokuthi azithobe, uPushpa wenza njengoba eyalelwe.
Ezinsukwini ezimbalwa kamuva, ngobusuku bangaphambi komshado kaPushpa, uPushpa noShekhawat bajabulela isiphuzo endaweni ephakeme yegquma eliseduze. Lapho u-Pushpa ebona u-Shekhawat ephethe isibhamu sakhe, uyasikhipha futhi azidubule ezandleni ebonisa ukudelela indlela aphathwa ngayo ngesikhathi behlangana okokuqala.
Ngemuva kwalokho, uphoqa uShekhawat noPushpa ukuthi bakhumule phambi kwakhe ukuze azuze. Indaba ithi ukuphakama kukaPushpa kuhlala kungashintshi, kuyilapho ukuphakama kukaShekhawat kuncipha kangangokuthi ngisho nenja yakhe ayikwazi ukuhlukanisa phakathi kwamadoda amabili ngaphandle kweyunifomu yawo yamaphoyisa.
Phakathi namalungiselelo kaPushpa omshado wakhe, uShekhawat ukhumula futhi angene endlini yakhe phambi komphakathi. Njengoba esondela, inja yakhe iyamthethisa, njengoba umuntu ebengayilindela. Ethukuthele egane unwabu, ubulala inja futhi washisa imali yokufumbathisa abeyitholile.
Funda futhi: Ifilimu yeThalaivii Impilo Yomlingisi waseNdiya
Yilokho kuphela esikwaziyo nge-Pushpa 2. Hlala ubukele ukuze uthole izibuyekezo ezengeziwe futhi siyabonga ngokufunda!
Indoda Yomndeni Isizini 3: Ukukhishwa Okuqinisekisiwe Kumavidiyo Abalulekile!